Wasaarada boostada oo ka jawaab celisay hadal ka soo yeeray Somaliland - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasaarada boostada oo ka jawaab celisay hadal ka soo yeeray Somaliland
Wasaarada boostada ayaa ka jawaab celisay hadal ka soo yeeray Somaliland. Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa 9-kii bishan si rasmi ah ula soo wareegtay Astaanta Qaranka ee Internetka Soomaaliya (dotSO) oo ay maamuli jirtay hay’ad ka madax banaan Dowladda.
Soomaali kasta oo ku nool Jamhuuriyadda wuxuu xaq u leeyahay inuu adeegsado furaha taleefoonka (252) iyo kan internet-ka (.so). Waxaa sidoo kale xaq u leh qof, shirkad, ama hay’ad kasta oo dalka ka hawl gasha.
Waa calaamad muujineysa juquraafi ahaan iyo aqoonsi ahaanba halka aad ku nooshahay, ka diiwaan gashan tahay ama ka shaqeyso.
Astaanta internetka waxaa si gaar ah ugu baahan shirkadaha, jaamacadaha iyo ururrada waddaniga ah, si ay u muujiyaan inay ka dhisan yihiin Soomaaliya iyo xaaladda diiwaangelin ee ay dalkaasi ka haystaan haddii ay tahay .edu.so, org.so, iwm.
DotSO waxaa maanta laga isticmaalaa adduunka oo dhan, in laga hor istaago qeybo ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee xaqa u lahaana waa go’aan aan u adeegeynin danaha dadka, shirkadaha, hay’adaha iyo jaamacadaha Soomaaliyeed, waayo waxay halkaas ku weynayaan in la aamino iyo in ay wax la qabsan karaan shirkadaha, hay’adaha iyo jaamacadaha kale ee dhiggooda ah.